Junedin Sadoo Samicha Wajjira Bishan Oromiyaa irra gara lafa Oromiyaati Kutaa 5faa
a. Samicha, Malamaltumman Abbahiirumaa Malli irra madaa? atamti dhabata?
Biyyota guddata jiran keessati balinan ummataa akka gadadamuu goochuun xuuxee kan ajeesuu malamaltumman fi sammichi biyya Ethiopia keessati dhiita’ee sadarka dhoo’uu irra ga’ee jira. Mootummoon heedun Afrika keessa kufatiif sababin isaa saxlee keessa Malamaltuma, samicha fi abbaahirummatii. Samichi, Malamaltumma fi Abbahiirumaa kun hundi wal qabatan adeemuu. Yakkota Ummataa irrati rawwataman dha. Yaakki kun yaaka dhangaa biyyan hin dangeefmnee yaakka jiratoota biyya qoofa utuu hin tanee lammii adunya hunda midhaaf saxiluu ta’uu isaa qoorannon bara 1997-2000 kasee gegefama jiru tokko ni mulisa. Bara darbee fi baran ykn November 2009 fi July 2011 Qooranno fi gabasii GPO Europa Parlamaatii ergamee irrati waan caqasamee kessa tokko Melese Zenawi AbbaaHiirree rarsasan nama fixuu qoofa utuu hin tanee Samicha fi Malamaltumman Ummataa Biyyati Miliyoona 86 keessa harki 90 jijenya gadadumaa keessa galan akka dhumman goochun “silent killer” jeechuun himatee ture. Malamaltumma fi samiicha kan hanga 2001 tii kan iit fayadama turan ilaman Tigray fi koree hoji raawwachiftuu TPLF qoofa turan. Warii kan ni soodatuu turan. Nami OPDO bayeen isaan Malaqa lolituun TPLF ummataa Oromoo irra Samee ilee yerrooni ukee tortoruu Adutii bassan guyya guyyan qoorsan ol deebsani ka’uu fi dhummati amoo wara kubanya TPLF/EFRT Tigrayf keenun ala qarshi tokko keessa fudhatan akka hin beeknee misensoon buleeyiin OPDO ragga ba’uu.
Samiicha fi Malamaltuma TPLF qoofan gegefama ture yerroo jalqabaf kan Oromiyya Galchee Junedin Sadooti. Junedin Sadoo biyya Eritrea fi Tigray keessati bishan lafa jala basuun beekama, erga Wajjira Bishan Oromiya galee booda garuu Bishan Basuu dhisee Damaa(Qarshii) basuu egalee. Badgeta wajjira Bishan Oromiya samuu irra darbamee Meshan biyya alati gargarsaf galuu samamuu egalee, yeroo mursaa Booda Junedin maqa Obboleetiin meshaa Bishan qoote basuu Milona 12 biteef jeedhamee. Guyya sun ani garii godheen jeedhe sababiin isaa warii TPLF bilyoonan yamuu saman Junedinf milion 12 heedu miti jeechuu kooti male malmaltuma degeruf miti. Nami goocha Junediin kan gaafa sun balaleefachuu egalee garuu kan jeedhe yoo amuma nama kana dhabisisuu banan nami kun Boroo caaraa gudda yoo argatee Oromiyaa gutuu sama jeedhee. Waan sodatan hin oluu jeedhama miti ree, Junedin yerro murassa booda jeequmsaa TPLF keessati dhalateen dhimma ba’ee Prezidaantii Naannoo Oromiyaa ta’ee. Junedin utuu boola bishan tokko utuu hin qootiinf Boran dheebun dhumaa jirti Azeb Masfin waliin deeme oduun rakkisa ture. Umman Boran, garuu kaleessasi harassi rakkun isaa rakko Bishanti Bishan laga Ganalee fi Shibalen utuu isaan birra yayee biyya Somalia dheebuu basuu Oromiyaan ogeessa bishan Prezidaanti utuu qabduu Booran Bishan dheeboochun Junedin Oromoof akka hin yaane ragga quubsadha. Maliif yoo jeetan kun hoji ogumma iitti qabuu waan ta’eef furmata lachuuf qoorannoo ogeesoota bayee isaa hin barbachisuu ture.
Namoon bayeen Beela, Gadadumma, biyya Baqachuun fi Hiyuuman Afrika mal irra akka ta’ee deebsuuf heeduu cinqamuu. Waqayoo Afrka badhatuu, qileensa garii, bishan fi biyoo garii, humna nama fi qabeenya waan hundan badhasee utuu jiruu hiyumaa keessati maliif gadadamuu yoo jeene Bulchinsa garii dhabuu, Oganoota of irrati amanta hin qabnee fi dandeeti hin qabneen abbootihiirreen oganamuu isaanti. Bara garii yerro garii keessa baroota 1990 -2000 keesan rakkon kana qoorachuuf Malamaltumma fi abbahirumaa atamiin dafnee Afrika keessa baleesuu qabna jeedhe gegefama ture, gaafii Prezidaanti Afrika Kiba Nelson Mandela fi Bareessa Mootummota Gamtoman Kof Anaanni Gaafadhen ture. Deebiin isaan gababa ture, “qabsoo gudda hagafatuu malee lafa dhiyoo keessati Afrikan Malmaltumma fi Abbaahiiruumma irra akka bilisaa tatuu” nati himan. Jarii kun lachuu Abbaanhiirumma fi Malmaltumman diina Afrika isaa gudda ta’uu isaa mirkaneefachuuf gaaf ani dhiyeesef mamii tokko malee na mirkaneessan. Dubfoota bareefama kana kabajamoo Afrika keessa waan hunda kan badhatee Kongoon rakko atami keessa akka isheen jirtuu yaadadha. Mabutoo sesesekoo, Kabaila fi Yusf Kabila rakko Kongo hameessa malee furmata fidafii hin jiran. Abbotttiinhiirree fi Samitoon ummataa isaanf danta tokko ilee hin qaban. Gadaafn ummataa isaa ficisisaa jira. Meles amoo Gaadhaf caalaa gadhee ta’uu isaa Mootummoon adunya keessatu Europan mirkaneefatee jira.
Sodan fi of irrti amanu dhabuun mal irra dhufaa?
Warii Siyyassa Maddi soda dandeeti dhabuu, ofti amoonu hanqachuu, bakka isaan hin madalee ta’uun soda iti humee strasse ykn jeequmsa samuu isaan keessati huma akka humuu mirkaneesu. Warii psyclogy amoo dhaloota isaa akkata gudiina fi jireenya isaa wal qabsisan madda isaa himuu, inisi namii sadarka gadiiti guddate bakka oogana yamuu ga’uu oftii amanu dhabee cinqamee jeeqama jeedhu. Biyya Ethiopia keessa Genet Zeuwde Gara jabeeti fi haminan akka gutamtuu kan ishee goodhe “Hadha budeenan reebama midhama gudatee jeedhu”. Junedin Sadoo ilee rakkina isaa degersaa horman waan guudateef yerro hunda of irrati amanta hin qabu jeedhama. Junedin Soda guda qaba sababin isaa Oromiyya rakkina basuuf muldhataa hin qabuu, kakaumsa hin qabuu, Oromoo fi Oromiya ‘defend’hin goodhu ykn hinfalmuuf, Oromoo wal qixaa hin ilaluu beeka (ogeesaa) of birrati hin jalatuu maliif? Kun gaafi nama hunda ture. Namoota Tigre walaltu ykn security TPLF wajjira isaa keessati naqeen ajejama ture. Oromiyaan bara Kuma Damassa kan bula turtee Tasafayee Ximmo nama jeedhamuun ture. Bara Junedin amoo Bilbila Azeb Masfin, Shek Alemudiin fi security ijoole xixinoo Baqale adunya, sisay “booda kan iitgafatama wajjira Dargagoota ta’ee”, Habtamu, Alemu Simee, Tesfaye kkf tantuu Oromiyaa olif gadii offa ture. Yoo dbanee dhukuba Tigre isiin jibsisutuu isiin qabee jeechuun bookisa.
Namoon waa sodatan waa malatuu, ykn dura ofi samatuu, gartuu ijarartuu, yoo humna cimmaa Hooratan abbaahiirrumaa isaani raggasifatuu. Yoo akka sodatan suun bu’uun dhufesi waan samatan sun fudhatan sookuu. Namoota of bukkeeti ijiruun waliin samacha tura ilee waluuma dhukka baduu dha. Mee gara Jundin Sadooti yamuu deebinuu. Soda:-
Junediin rakko caqasamee kana hunda qaba ini gudan Soda dha. TPLFn ni sodata malamaltumman na qabatuu waan jeedhuuf waan isaa ajeejan hunda ni rawwata Melese Zenawi dhisii Genet Zeuwde yamuu ijoole Oromoo kumataman mana barumsatii arsiftuu tole jeedhe raggasisuu irra darbee, yaaka ijoolen Oromoo hin rawwatiin akka raawwatanti TV ti bayee ragga iti ba’aa ture. Hanga gaafa Junedin Prezdaanti Ta’uuti OPDOn samicha hin beektuu turte. Junedin qoofa samachuu waan sodateef ijoolee Arsii hunda Amara fi Tigree Arsiti dhalatee hunda gartuu malamaltumaa ijaree waliin samsisuti ka’ee, icitii isaa akka dhoksanf jeecha qulquleesituuti kassee hanga iitgafatamtoota wajjiralee hunnda fi Ogannota Goddinalee namoota Ganda isaa muduu egalee. Ittigafatamtoota Wajjira hunda torban torbanin jijiruu egalee, Gorsitoota fi Expertoota Nannoo Oromiyaa biroo irra dhufaan hunda wajjira isaa keessa qulqulesuu egalee. Wara kan amoo angoo irra gadii busee hoji malee ka’ee gara anaati gadii ergu Egalee Bafaqaduu Jirenya Anna Masala Hararget, Baqalee Jirata Tajajila wagga 25 booda Ana Digaloof Xichoo Arsiti darbataman Oromoon hundi utuu hin jalatiin ABOti ramadamee. Tarikuw kan jeedhamtuu Bareesitu isaa irra kan hafee wajjira isaa keessati nama Nannoo Arsi kessatu Isilama ta’ee qoofatu mirga qaba ture. Kun amoo feedhii malamaltummaa isaa babalisa deeme. K/Aman Kadir nami bareesuu fi dubsuu hin dandeenye dhimma hunda irrati murteessa fi Guboo, Barcaa, meesha barbachisuu dhiyeessa ta’ee tajajiluu egalee. Saudi-Arabiyan Majjilessi Wajjira Junediin Seene Oromummaa Irra gara Arabumati jijiramne. Mohamad Qoophe amoo dhiyesii dabartoota, Cabsii fi qindesssa Oduu ta’uun yamuu tajajiluu, Bqale Adunya amoo nama hama Junedin dubatuu hunda ABO jeechun Tapela itti rukutun hisisuu hoji isaa goodhate Obbo Tafara Nasagi, Baqale Jirata, Legesa Deeti kkf Kazanchis fi Maikalawti ulee Dhamalash G/Mikaeal ittiana polisi Oromiyaan dararama tura. Nammota Beela baqatan Junedinti Iyyachuu dhufan Mohamad Qoophe gara jabina qabee mana hidhatii erge maliif lata? Goochan isaa in lammii isaa irrati rawwatee kun boode Kanserii samuu itii ta’uun isaa rakkisa ture.
C. Junediin Soda isaa kan hambisuu mali goocha ture bu’aan isaa mali fidhee?
Junedin sadoo Soda fi Malamaltumaa isaa agugee dhoksuuf jeecha utuu hin beekni yaaka fi rakko hama ummataa Oromoo keessati ijaree darbee. Bu’uuri Gandumma fi Amanta Junedin Sadootin bu’uurfamee kun dhigga dhangalassa jira. Oromoo heedun yaaka tokko malee mana hidhatii guuree jira. Junedin garuu waan hojeete sun hin galuuf. Yakka Ziyaddi Bareen Ummataa Somalia keessati dhalchee deeme sanan wal fakkata. Junedin Naanumman yerro nama Arsii Oromiyaa keessati bakka bakka qabsisisuu warii hafan amoo “Arsinal nufixee” jeechuu egalan kun Oromoof gadda. Junedin Prezdaanti ta’ee utuu hin turen froota horachuuf jeecha Mohamad Alyyii fudhatee Stadiyomiti bakka Shekicha gudda qabatee Salatuu egalee kun ilee of amanta dhabuudha. Keessa bayee iyyu Oganoota Isilama Nannoo Hargrgeeti dhufan Hajji Olana Musilima dabalatee ABOti shakuu egalee. Junediin lelessa musilima kan of goochuu yaaleef degertoota sasabachuuf malee amanti isilamumaf jalala qabateef miti. Junedin takka ture amoo Mazigida Anuwarii jijire gara Mazigda Sheki Almudiinti jijiratee Amachisa ta’uu isaati, kun ilee soda waan qabuuf shekichi kun rakkon yoo dhufee Melese birra galuun Junedin rakko irra akka hanbsuuf yaadameeti.
Junedin Sadoo garuu goocha isaa kanati gamadee kan birra darbuun Mohamad Qoophee bareefama akka dhiyessuf goochuu Oromiyyan Artsitoota biyya ala fi Baqatoota Siyyssa biyya ala jira sosobuu, gorsun fi malaqan bituu biyyati deebsuuf karoora bala fudhatee Melese birra deeme. Ergasi booda namoon Junedin hoji isaa milkeesuf danda’an soqamuun egalee namoon kun ilee ilalichuma Junedin Sun jalati isaan keessa Dawannoo Kadir, Makiya fi Abba Mana ishee, Prof. Abdulhab, Mohamd Qophe, Alemayo Katama turan, dirqami Atatama Walftoota akka Ali Birra, Kemer Yesuf, Naahoo Gobana, Elemoo Alii, Elfinash Qanno Ababa Abashu Dawwite Makoon, kkf biyyati deebsuu media ABO xiqeesa ture, ini lamafa kara Dawwanno Kadir Obboleesa isaa Norway jiruu, dabalatee Hasan Husen Lencoo Bati, Nuur Dadafo, Jaamal Galchuu, Abiyuu Samuu, Abba Nagga, Qilxuu kkf hawwachuun ABO irra cabsan biyyati galchuun ABO dhabmsisu kan jeedhu ture. Jijirama ykn Micirama TPLF ABO irra kutatee sun Oromoo waliin qabsoo bilisumma dhugoomsuu kan hin dandeenye Ginbot 7 waliin tokko ta’een Oromoo Bilisa bassa Jeechuun Sayiinsi qoormata atamiti lata?. Jaalan Bilisummaa Oromoof bara 19973 kassan qabsa’aan isaan jibisisee kan Ginbot 7 isaan booda ijarameeti isaan galchee ajeeja mana waqatiin moo ajeeja Melese Zenawiin? Kun hundi dirmadha, TPLF durman iyuu ABO keessati jara kana ijaratee kana ture fi yerro isaa egatee waan ifaa bayee ta’aa lata?. Gamitan Jijirama fi Ginbot 7 ilee ergama TPLF waliin wal laqee jirachuu isaati. Jijirama keessati waan hin beekne wallin warii deema jiran Jeneral Hailu Gonfa fi Ibrhaim Umee nama jeedhamun ala warii kan waadaa jarsolii gosaa fi TPLF of keessa qabu jeedhuu warii Qabsoon itii hadhoofnan biyyati deebiyan Abdata Bakre faa. Sanadiin kun Gaafa Oromiyyan Bilisoomta TV oromiyyati dhiyaata. Jeequmsii ABO keessati dhalatee Jijirama utuu hin tanee Micirama TPLF kara Junedin Sadoo dhalchitee ta’uu Oromoon beekuu qaba. TPLF ABO diiguun ummuri isaa dheerfachuuf waan ini hin goone hin jiru. Sababin isaa Ginbot 7, MEDRAK kkf fi dhaabilee birroo kana booda Oromiyya keessati lola tokko ilee gegesssan milka’uu akka hin dandeenye beekamadha. Utuu Biyya Amhara keessati lola gegesaa dhufan ilee Danga Amhara asi c’eeuu hin danda’aan, OPDO oromoo of dukka hirirsee dara ishee goochuu ni danda’aa. Kanaaf rakkon Wayyane Oromoodha kanaafu dhabba maqa Oromoon hojeetuu keesummati miseensoota WFDO fi ABO namoota shakaman baleesun saganta hojiiti qabameef hojeetama jira. Giiduu kan Junedin Sadoo dabalatee barsiftoon wayee Shororkeessa barsisian Oromiyaa keessati boosee jira.
Gabassa GPO irra waan dubsee isiin caqasaa “Sodan dhukuba, sodan madda malamaltumati, Malamaltumman ilee soda birra dhalacha kun amoo Ganda fi Amantan of ijaruu fidha. Ganda fi Amantan of Ijaruun amoo Abbahiirumaa seera fi heera ol ta’uu fidha” jeedha.
Abbahiiree waan nama tasisuu malii? gababati dandeeti dhabuu ofti amanuu dhabuu irran kan ka’ee ganda fi Amanta of ijaruun kan hafee amoo hunda humnan dhitani of jalati bulchuuf murteefachudha. Malamaltumma fi samiichaf kan nama kakasuu malii yoo jeetansi gababati daandeeti dhabuu, of irrati amanta dhabuu, waan hoojeetan sanatii ittifufinsa isaa irrrati amanta dhabuun, hangan caaraa argadheeti samachuun qaba jeechuutun yaaduutuu samicha fi malamaltumaaf nama kakassa. Isaa Saman fi Malamaltumman argatan suun eggachuuf amoo Ganda fi Amantan waraa isaa fakkatan of jalatii ijaaruun wara kan gadii dhitan Bulchuun abbahiirumma fida.
Furmatii Samichaa, Malamaltumma fi Abbahiirrummaa Waraqisaa gegesuun jijirama bu’uura gegesudha. Ofti amanuma, hojii fi seera fi heerati amanuu qoofan jirachuu danda’uu barsisuu. Namoota Yaaka dalagan hunda addabi cimman adamaman akka brumsaa hormaaf ta’aan goochuu. Angoon kan ummataa malee kan dhaabba tokko ykn kan mootumma angoo irra jiruu akka hin tanee mirkaneesun. TPLF mana murtii adunya dhabuu /OPDO soroba bartee amoo achumati addaban akka badisheti siiresuu.
link kana irra yaaka Junediin Sadoo dubsuu hin hirnfatiina yaakamtuu hadamuu qabdii!!!!